Jacket "Industries Alpha" - isitayela eyiqiniso, ithonya ezingaphelelwa isikhathi kwesikhathi
Isithombe ezempi, airman noma itilosi bekulokhu ziwuphawu lwamandla, isibindi nokuzethemba. Ngakho ukuthandwa izingubo ezifana ngesitayela ezempi. Le nkampani "Industries Alpha" ekuqaleni ezikhethekile womshini izingubo neyezempi Army, Air Force ne-US Navy, futhi ekuqaleni kanye ukukhiqizwa okucishe kufane nalokhu ezisetshenziswa umphakathi kusukela ngo-1980. Manje sha is emhlabeni wonke ezaziwa, ukudala izitayela ezintsha in fashion ukuthi babé zabuna ezingaphelelwa isikhathi ngokuhamba kwesikhathi. Enye yezindawo eyinhloko ukukhiqizwa sha kuyinto jacket "Alpha Industries." Sekuyisikhathi eside uphawu inkathi, ngokuhlanganisa fashion eliphambili abayitoho wezempi isitayela, abakhetha asebenzayo izinsizwa nezintombi.
Isizini abandayo ubeka ingcindezi phezulu endabeni yokukhetha izingubo zokugqoka. Kufanele kube zikanokusho sha, kodwa futhi izinga, elifudumele kakhulu futhi ezingokoqobo ukugqoka futhi anakekele hhayi kuphela. jackets Winter 'Alpha Industries' zisuselwa imodeli efakazelwe amashumi eminyaka "ipaki" jacket. Ngo womshini zabo izinto nge ukumelana ezehlukile okushisa aphansi, anda ukumelana namanzi. Winter ibutho ibhantshi kumele kube eyizingqabavu ikakhulukazi, futhi lokhu kuthinta iqophelo onobuhle zamanje. Phakathi jackets ebusika "Alpha Industries" yilezi ezilandelayo: Alaska (hooded), lesikhumba jacket webhomu (nge liner) jacket, semvu (lesikhumba jacket ne noboya). Ngamunye wabo inezici ayo ehlukile futhi izici kokubili amadoda kwabesifazane kanye imigqa zezingane, ngakho lapho ekhetha isidingo sokufunda incazelo model wayefisa kusengaphambili. Winter jackets ukumelana okushisa afinyelela ku -20 ° C.
Ukuze kukhiqizwe amajazi phezulu esetshenziswa inayiloni - manzi, wumoya futhi impahla aminyene kakhulu, okuyinto kulokhu engasindi futhi nokunwebeka. Izinyembezi-umphetho ubuchwepheshe esetshenziswa brand, enye plus lezi izingubo. Winter jacket Alaska "Alpha Industries" uvezwa uchungechunge ezimbili eziyinhloko - ende N-3B Parka futhi emfushane N-2B Parka. Sihlukanisa kubo futhi uhlobo olukhethekile ukwahlukanisa. Yena wenziwe polyester obusetshenziswa embonini zezindiza kanye manje. Material uyakwazi eside ukubambelela ukushisa at okushisa ngokwanele ongaphakeme. phezulu okuqinile, quilted inayiloni ulwelwesi, a ukwahlukanisa ezikhethekile izinto eziyisisekelo. Isici esiphawulekayo alyasok - hood nge Faux noboya futhi opushok yokufakelwa. It unamathele izinkinobho izinkinobho.
Syech "Industries Alpha"
Isigaba ahlukene kukhona jackets ebusika Alaska noma amapaki nge feather ulwelwesi. Baze ukufudumala, ne esisebenzayo efanayo futhi iqine. Lokhu kuqinisekiswa khona ulwelwesi padded, okuyinto ngokulinganayo ihambisa ukwahlukanisa iphinde ivimbele dislodging. Jacket "Industries Alpha" ku izimpaphe kuyoba yinto enhle kakhulu umphelelisi yezinkathi ezithile zabesifazane, amadoda noma zezingane ikhabethe sibonga hhayi kuphela yokufakelwa, kodwa futhi ngezinto zemvelo.
Winter noboya jackets 'Alpha Industries' libanakekele ekhethekile. Lokhu zakudala vintage, osekuyisikhathi eside isetshenziswa kanye ezihlukahlukene izimo zezulu. Umugqa emelelwa dublenok onobuhle ezintathu eziyisisekelo - B-3 Vintage semvu webhomu (ku semvu okusezingeni eliphezulu), B-3 Sherpa (noboya-ngaphakathi), no-B-7 Vintage semvu parka (Ipaki semvu). Bahlezi ngokuqinile sibalo, abe okusezingeni eliphezulu hood ezizibeni ezinhlangothini futhi ukubukeka vintage. Syech uyoletha charm esiyingqayizivele isithombe sakho, futhi bafake wedwa nenhle.
Classical onobuhle ekuhlaseleni ushiye akekho ngabandayo futhi lavuselelwa ukuqhubeka iminyaka engaphezu kwamashumi amahlanu. Isikhumba jacket "Industries Alpha" kungaba kokubili ebusika futhi demi-isizini. Lunqume yilona khona noma ukungabi khona iphedi ukufudumala. Syech abe obuphelele ngaphansi komugqa ibhande. Ngezansi ukusikiwa nge uphawu enjoloba band of nangebala. Syech zakhiwe premium imbuzi isikhumba izinga noma cowhide mkhulu. Ebusika kukhona onobuhle ngesikhumba semvu heater noboya collar. Izinguqulo demi-isizini kanti akunjalo. Isikhumba jackets ifakwe zangaphakathi nezangaphandle patch emaphaketheni. Kwamanye tinkhulumo, kukhona ehlombe ezizibeni kanye ephaketheni ekhethekile ku emkhonweni.
Lezi zihlanganisa lesikhumba jackets kanye jackets unlined. isitayela Classic uyobenza utshalomali uyakufanelekela ikhabethe lakho sibonga kungenzeka ukugqoka umkhiqizo zonyaka eziningana kuyo yomibili le ekwindla kanye entwasahlobo. Jacket "Alpha Industries" has ngokunembile usizo futhi ihlala isikhathi eside, ezokwenza ukumelana imvula manzi ne umehluko izimo lokushisa.
Inisheli umsebenzi wabo - ukuvikelwa umoya, futhi nalo ababhekana ngayo bang, nahlulele by izibuyekezo eziningi on enetheni. Jacket umnikazi 'Alpha Industries' ukunika induduzo oyifunayo futhi ngaleyo ndlela wakunqoba imfashini futhi stylish, egcizelela nobunye bomuntu ngamunye ezinhlelo isithombe. Classic brand jackets ezenziwe ngesitayela wezempi, futhi zesimanje emigqeni lokugcina bagcizelela kakhulu ukubaluleka umugqa ezikhululekile.
Eminyakeni engaphezu kwengu-angamashumi ayisikhombisa izinga okungaguquki owaziwa umhlaba ngokwabo ayisiqinisekiso kulabo inqubo yokwenza izinqumo wokuthenga. Syech 'Alpha Industries' (libuyekeza umlando abangaphezu kwengxenye yekhulu leminyaka, akungabazeki ukuthi uqinisekise lesi) Sekuyisikhathi eside kwaba uphawu isitayela, ukusebenziseka kanye ubuqiniso design. Osaziwayo - abesilisa nabesifazane - uthanda izingubo Alpfa Industries, befuna bheka egqamile futhi yesimanje, njengoba kufakazelwa izithombe eziningi kunethiwekhi.
Futhi onobuhle zasendulo jackets kanye nezixazululo ngaphezulu yesimanje kusukela brand American lavuselelwa ukuqhubeka. Ngoba bonke abafuna ivelele, usitshele wena ngokusebenzisa isitayela sokugqoka, jackets "Alpha Industries" kuyoba engcono win-win isixazululo ukutayela isithombe kwesizini.
Isimo Sebhizinisi Yabesifazane
Indlela ukukhetha amabhuzu quilted? amabhuzu quilted: Izibuyekezo
Kanjani ngokuthi fingerless amagilavu?
A push-up brassiere obviate le izakhiwo
Zabesifazane emseleni elingenamikhono: Khetha isitayela, sizogqokani
Thenga efulethini laseKharkov
Royalmaxbrokers: France "uya kwesobunxele"
UPaul Feyerabend: imibono eyisisekelo
Indlela yokuvula Manager Kudivayisi e Windows XP, 7, 8
Yezandla kusukela ukufana ngezandla zabo. Indlela yokwenza yezandla ukuze izingane yemidlalo
Itiye Koporye - isiphuzo yendabuko Russian
"Solikoks" I-onogwaja: imiyalelo, imiphumela emibi, izindleko
Windows 7 firewall: indlela amandla uphinde ukhubaze
Kuhle intsha ezishaqisayo abangase babhekane nazo. Top 20